शहीद महिला पत्रकार सिंहको नाममा अक्षय कोष
प्रमोद कुमार साह जनकपुरधाम । पहिलो शहीद महिला पत्रकार उमा सिंहको नाममा जनकपुरधाम उपमहानगरका लालकिशोर साहले अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आइतबार भिजिट मधेसद्वारा आयोजित तराई मधेस
पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन: चीनका सात बन्दरगाह प्रयोग गर्दै नेपाल
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।
फलाम उत्खननको तयारी अन्तिम चरणमा
नवलपरासी । धौवादीमा भेटिएको फलाम खानिबाट फलाम उत्खननको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएकाे छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फलाम खानी उत्खननको तयारी अन्तिम चरणमा
सर्लाही होटल तथा पर्यटन संघको अध्यक्षमा पुनः योञ्जन
श्रवण थापा सर्लाही । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ सर्लाहीको अध्यक्षमा पुनः हीराकाजी योञ्जन चयन हुनुभएको छ । सर्लाहीको हरिवनस्थित सम्राट होटल एण्ड पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न संघको साधारण सभाले पुनः
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत लमजुङ खण्डमा विराेध
फाइल तस्बिर काठमाडाैं । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तगर्त लमजुङको भोर्लेटारका प्रभावितहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर ६, भोर्लेटारको रानीपानीदेखि रामबजारसम्मको चार किलोमिटर विवादास्पद सडकखण्ड
काठमाडौं । केही समदेखि निकै उताबचढाब हुँदै आएको सुनको मूल्य आइतबार बढेको छ । आज छापावाला सुन चार सयले बढेर ७५ हजारमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायि महासंघले जनाएको छ ।
व्यवसायीलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्च
काठमाडौं । धेरै लाभ हुने व्यवसायका रुपमा हेरिने सुनचाँदी व्यवसायमा धेरै समस्या रहेका सरोकारवाला बताउँछन्। व्यवसायीहरुले राज्य पक्षबाटै प्राताडित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्। शनिवार ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी
‘आर्थिक वृद्धिदरमा लक्ष्य हासिल गर्न तोड्मोड’
काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले आर्थिक वृद्धिदर तोड्मोड हुने खतरा रहेको बताउनुभएको छ । अर्थशास्त्री थापाले ‘द हिमाल एजुकेशन फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च सेन्टरको शनिबार आया्ेजत १५ औं वार्षिक साधारणसभामा
नयाँ वर्षसँगै शेयरमा उत्साह, सातामै ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । सातामा ४ अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । यो साता कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले नयाँ उचाइ हासिल ग¥यो । लगातार ओरालो लागेको बजार करिब एक सय बिन्दुमाथि
दुर्घटनामा वडाध्यक्ष चौधरीको मृत्यु
सेनाले माग्यो पण्डितदेखि खेलाडी : २३२३ जनालाई अवसर
हवात्तै घट्यो प्याजको भाउ, किलोको कति ?
प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक दिन मापदण्ड
६८४६ प्रहरीले दिए राजीनामा